Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo xaflad soo dhoweyn ah loogu qabtay dugsiga sare ee tababarka Booliska
Waxaa shalay lagu qabtay dugsiga sare ee tababarka Booliska ee Jeneral Kaahiye munaasabad aad ugu weyn oo lagu soo dhaweynayay Taliyaha Cusub ee Ciidamada Booliska Soomaaliyeed General Shariif Sheekhuna Maye taasoo ay ka soo qeyb qaleen Mas�uuliyiin fara badan oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Munaasabadaan lagu soo dhoweynayay Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska S/Guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxdii kasoo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Wasiir Ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Mudane Ibraahim Isaaq Yarrow , Taliyaha Ciidanka Booliska, taliye Ku xigeenka ciidanka Booliska General Cabduraxman Gasgas, Kooxda fanaaniinta Booliska ee Heegan, iyo Kooxda muusikada garaacda ee baambeyda Booliska.
Taliyaha ciidamada Booliska S/Guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa barxadda weyn ee kasoo horjeedda dugsiga sare ee tababarka Booliska salaan Sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Booliska kuwaasoo socod gaaddo ka cayaara kusoo maray goobtaas.
S/Guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa halkaas Khudbad dheer ka jeediyay ka codsaday saraakiisha iyo ciidanka Booliska inay u shaqeeyaan dadkooda, isagoo ballaan qaaday inay heli doonaan wax kasto oo ay xuquuq u leeyihiin, loogana baahan yahay dhankooda in ay waajibaadkooda Qaranimo ay gutaan.
Sidoo klae Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Xukuumadda KMG Soomaaliya oo isna ugu dambeyntii halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go�antahay inay hormuud ka noqoto soo celinta amniga iyo sidii ay isku filnaasho u gaari lahaayeen shacabka soomalaiyeed.